Alisha Rai - Loot2item dancer and model
Topic: Alisha Rai - Loot2item dancer and model
Author Topic: Alisha Rai - Loot2item dancer and model (Read 15356 times)
« on: February 17, 2017, 08:24:40 PM »
Alisha Rai is known for various short movies at youtube and mostly nepali music videos. . She has became popular as celebrity when her item dance in most awaited movie Loot2was released through YouTube . The item dance titled Thamel Bazaar went viral in social medias. She is from Kathmandu and soon to be nepali film actress.
Alisha-Rai-1.jpg (15.22 kB - downloaded 341 times.)
Re: Alisha Rai - Loot2item dancer and model
« Reply #1 on: February 17, 2017, 08:25:27 PM »
Model-Alisha-Rai-Photo-5.jpg (119.96 kB, 750x501 - viewed 1004 times.)
« Reply #2 on: February 17, 2017, 08:26:09 PM »
Model-Alisha-Rai-Photo-8.jpg (118.3 kB, 518x750 - viewed 915 times.)
« Reply #3 on: February 17, 2017, 08:28:13 PM »
Model-Alisha-Rai-Photo-7.jpg (121.37 kB, 501x750 - viewed 725 times.)
Model-Alisha-Rai-Photo-4.jpg (125.23 kB, 501x750 - viewed 743 times.)
« Reply #4 on: February 17, 2017, 08:31:39 PM »
Sexy lady in black.saree !!!
Model-Alisha-Rai-Photo-6.jpg (117.62 kB, 515x750 - viewed 2125 times.)
« Reply #5 on: February 17, 2017, 09:44:52 PM »
« Reply #6 on: February 26, 2017, 03:34:44 PM »
लुट २ : दर्शकलाई मनोरञ्जन (समीक्षा)
चार वर्ष अगाडि एउटा फिल्म रिलिज भयो। त्यो एउटा अर्को फिल्ममात्र थिएन, फगत एउटा संख्याका रूपमा गनिने। सो फिल्मले एउटा भिन्न नाम र परिचय बनायो। फिल्म थियो 'लुट'। एउटा खासै नाम नसुनिएको युवा निश्चल बस्नेतले निर्देशन गरेको फिल्मले नेपाली फिल्ममा एउटा कोशेढुङ्गा स्थापित गर्‍यो जसको चर्चा नेपाली फिल्म निर्माणको नालीबेलीमा कहिले छुट्ने छैन्। नेपाली फिल्म इतिहासको उकाली ओरालीमा फिल्मको चर्चा 'पोस्ट' र 'प्री' लुट भनेर भइरहनेछ।
सो फिल्मबाट निश्चल नेपाली फिल्मका एउटा गर्विला अनुहार भए। उनै निश्चल चार वर्षपछि तेस्रो फिल्मका रूपमा आफ्नै पहिलो फिल्मको सिक्वेल लिएर दर्शकमाझ आएका छन्। शुक्रबारबाट रिलिज भएको फिल्ममा धेरैको नजर छ, फिल्म कस्तो बन्यो भनेर?
वर्षकै सर्वाधिक प्रतिक्षित बनेको फिल्मको कथा देशमा गत वर्ष भारतले लगाएको नाकाबन्दी वरिपरि घुमेको छ। नाकाबन्दीमा पेट्रोल,डिजेल, मट्टीतेल र ग्यासको अभावले काठमाडौं सिथिल छ। विनाशकारी भूकम्पले थिल्थिलिएको देशमा नाकाबन्दीसँगै पेट्रोलियम पदार्थको कालोबजारी मौलाएको छ, त्यसमै मौलाएको छ 'हाकु काले' (सौगात मल्ल)को कालो कारोबार। भूकम्पको मौकामा जेलबाट भागेका नरे (कर्मा), गोफ्ले (दयाहाङ),पाण्डे (सुशिल राज पाण्डे), देवेन (प्रतिक राज न्यौपाने) आफूलाई फासाउने हाकुलाई बदला लिन दिनरात खोजिरहेका छन्। उनीहरूले हाकुलाई कसरी भेट्टाउँछन् र आफ्नो बदला लिन सक्छन् या सक्दैनन् यसैको सेरोफेरोमा फिल्मको कथा अगाडि बढ्छ।
'लुट-२' 'लुट' जत्तिकै राम्रो छ कि छैन्? दर्शकको दिमागमा आउने पहिलो प्रश्न यही हो। फिल्म पहिलो सिक्वेल जत्ति बलशाली छैन्। यसका लागि फिल्मको पटकथा जिम्मेवार छ। पटकथाले मुख्य रूपमा हाकु काले तथा गोफ्लेलाई बढी ठाउँ दिदाँ खुकुलो बनेको छ। दर्शक हसाउँने ध्याउन्नमा फिल्म फस्दा केही दृश्य फिल्ममा चाहिनेभन्दा बढी लामा छन्। चाहे त्यो गोफ्लेको प्रेमिकासँगका दृश्य हुन् या हाकु कालेसँग गोफ्लेको टोली भिड्दा। ती दृश्यले फिल्मको लयमा स्पिड ब्रेकरको काम गरेका छन्।
उनीहरूलाई प्राप्त ज्यादा ठाउँले सुशील, कर्मा, प्रतिकको स्क्रिन स्पेस खुम्चिएको छ। त्योसँगै तिनले फिल्मलाई लम्बाउने काम पनि गरेका छन्। फिल्मले यी कुरामा ध्यान नदिदाँ कथा अनुसार घटेको छ।
माथि उल्लेखित कुराहरूलाई सम्पादनमा कस्न सकिन्थ्यो। तर, सम्पादनमा पनि खुकुलो छोडिएको छ। सम्पादन खुकुला हुँदा फिल्मले दर्शकमाथि पार्ने प्रभाव कम हुन पुगेको छ। करिब २ घण्टा १० मिनेट लम्बाइको फिल्मलाई सम्पादनबाट केही छोटो बनाउने काम गरिएको भए फिल्म मजबुत हुने थियो।
पटकथा तथा सम्पादनमा यी कमजोरी भए पनि कलाकारहरूको अभिनय फिल्ममा सबैभन्दा अब्बल छ। 'हाकु'को रूपमा सौगातले आफ्नो लयलाई पहिलेको जस्तै गरी समाइरहेका छन्। 'गोफ्ले' बनेका दयाहाङ आफ्नो भूमिकामा एकदमै फिट छन्। 'पित्तल' बनेका विपिन कार्कीले आफूलाई प्राप्त स्क्रिनस्पेसमा बेग्लै उभ्याएका छन्। उनको कमिङ टाइमिङले दर्शकलाई सर्वाधिक प्रभावित पार्छ। विपिन आफ्ना अघिल्ला फिल्महरू जस्तै यसमा पनि भर्सटायल छन्।
नरे बनेका कर्मा र खत्री बनेका प्रतिकले पनि पाएको भूमिकालाई सहज निर्वाह गरेका छन्। यसै गरी सिर्जना सुब्बा (पुतली) र प्रविण खतिवडा (माने) को काम स्वभाविक छ। फिल्ममा नवप्रवेशी अलिशा राईले सुन्दरीको भूमिकालाई सहजै गरेकी छन्। आफ्नै उमेरको भूमिकाबाट उनले पनि दर्शकको मन जित्छिन्। यसैगरी कामेश्वर चौरसियाले राम्रो काम गरेका छन्।
निर्देशकका रूपमा निश्चल फिल्ममा सर्वोत्कृष्ट देखिएका छैनन्। उनको निर्देशन फस्ट डिभिजन भन्दा केही माथि मात्रै छ। कथासँग स्क्रिन प्लेको सन्तुलन मिलाउन उनी केही असफल देखिए। फिल्मका लेखक पनि उनी स्वयम् भएकाले फिल्म लम्बाइ-चौडाइसँग उनी जत्ति कोही साक्षात्कार हुन सक्दैन्। तर पनि उनले स्क्रिन प्लेलाई कस्न धरमराएका छन्।
फिल्ममा उनले गरेको ट्रिटमेन्ट तारिफयोग्य छ। फिल्म उनले 'ट्विस्ट'हरूको राम्रो प्रयोग गरेका छन् तर तिनको असर फिल्म लामो हुँदा कम प्रभावशाली पनि छ। दर्शकलाई बदला कसले लेला भन्ने कुरामा बाँधिराख्ने उनको प्रयत्न इमानदार छ भलै त्यो पहिलो श्रृखंलाको दाँजोमा उभिएको छैन्। फिल्ममा प्रयूक्त संवादका लागि भने निश्चल सर्वाधिक प्रशंसाका पात्र हुन्। पहिलो श्रृखंलामा रहेको संवाद लयलाई उनले यसमा पनि उत्कृष्ट ढंगले निरन्तरता दिएका छन्। संवादहरू बोलिदा दर्शकहरूले बजाउने ताली र सिठ्टीले उनको उत्कृष्टतालाई सहजै प्रमाणित गर्छ।
छायाँकारका रूपमा पुरूषोत्तम प्रधानको सिनेम्याटोग्राफी राम्रो छ। फिल्मको ब्याकग्राउण्ड अर्को उल्लेखनीय पक्ष हो। यसमा रोहित शाक्य तथा शैलेश श्रेष्ठको कामको तारिफ गर्नुपर्छ। राजकुमार उप्रेतीको दन्द्व-निर्देशन अब्बल छ।
अभिनय, छायाँकन, कथा, संगीत, द्वन्द्व तथा व्याक ग्राउण्ड स्कोर फिल्मका राम्रा पक्ष हुन्। खुकुलो पटकथाले केही कमजोर लागे पनि 'लुट २'ले दर्शकलाई निराश पार्दैन। दर्शकले 'लुट'को हाराहारीमा यसलाई नभेट्टाए पनि फिल्म हेरिरहँदा मनोरञ्जन लिन्छन्। फिल्मले एउटा ठूलै तहलाई खुसी पार्छ। हल गएर 'लुट २' हेर्ने निर्णय दर्शकका लागि गलत हुनेछैन्।
अधिकाशं सिक्वलको खतरा भनेको पहिलो जस्तो दोस्रो हुन्न र दोस्रो जस्तो तेस्रो हुन्नन्। 'लुट'को दोस्रो श्रृखंला पनि यस्तै सिक्वेल हो।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फाल्गुण १३, २०७३
« Reply #7 on: February 26, 2017, 03:35:10 PM »
कमजोर कथा, बलिया संवाद : लूट २ समीक्षा
कुनै पनि चलचित्रको घटनाक्रम द्वन्द्व सँगसँगै अगाडि बढेको हुन्छ, चाहे त्यो आन्तरिक होस् चाहे बाह्य । चलचित्रको अन्त्यसम्ममा दर्शकलाई अब के होला भन्ने जिज्ञासा जगाउन सकियो भने फिल्म चाखलाग्दो बन्छ ।
लगभग चार वर्षअघि सुपरहिट चलचित्र ‘लूट’ ले धेरै दर्शकको मन जित्यो । समीक्षकबाट राम्रो समीक्षा पनि पायो । निर्देशकले यसको सिक्वेल ‘लूट २’ को चार वर्षपछि निर्माण गरे । यो समयावधिमा धेरै परिवर्तन भए । थुप्रै घटनाक्रम फेरिए । नाकाबन्दी र भूकम्पले देश प्रताडित भयो । कालोधन्दा गर्नेहरू मोटाउँदै गए ।
चलचित्र ‘लूट’ गोफ्ले, नरे, देवेन र पाण्डे पनि भूकम्पको फाइदा उठाएर चार वर्षपछि जेलबाट भागे । नाकाबन्दीले हाकु कालेलाई मालामाल गरायो ।
जेलबाट भागेका गोफ्ले (दयाहाङ राई), नरे (कर्मा), देवेन (प्रतीकराज न्यौपाने) र पाण्डे (सुशीलराज पाण्डे) महिनौंदेखि हाकु काले (सौगात मल्ल) को खोजीमा छन् । उनीहरूलाई हाकुसँग बदला लिनु छ । चार चार वर्षसम्म जेलमा बस्नुको सबै दोष हाकुकै छ भन्ने ठहरमा यी चार पात्र हाकुको खोजीमा छन् ।
कोट र दौरा सुरुवाल मात्र लगाउने हाकु कालेको आर्थिक स्तर सुध्रिसकेको छ । उसको जीवन भट्टीभन्दा माथि उठेको छ । पुतली (सृजना सुब्बा) सँगको उसको जीवन आर्थिक रूपमा सुखी भएको छ । अङ्ग्रेजी भाषासँग पनि हाकुको बडो झुकाव छ । उसका सपना स्थुल बन्दै गएका छन् ।
निर्देशकले यो कुरालाई ध्यान दिएर प्रमुख पात्रको चरित्र विकास गरिदिएका हुन् । सौगात मल्लले पनि आफ्नो ‘हाकु काले’ को भूमिकालाई आकर्षक ढंगले अभिनयमा बाँधेका छन् ।
चलचित्र मध्यान्तरसम्म गज्जबको छ । सस्पेन्स चलचित्र भनिएको आधारमा घटनाक्रमको उद्घाटन पछि हेर्न पाइन्छ कि भन्ने आशा गरिन्छ । तर मध्यान्तरपछि भने चलचित्रले बिस्तारै आफ्नो लय गुमाउँदै जान्छ । पात्रहरूको जोश उही रहेजस्तै पनि लाग्छ, अनि जोश नै गुमाए जस्तो पनि लाग्छ । के कुराले चलचित्र मत्थर हुँदै गयो भन्नेमा दर्शक आफैं अलमल पर्न सक्छन् ।
चलचित्र कमजोर बन्दै जानुको कारण यसको मूलकथा हो । जुन गतिमा मध्यान्तरभन्दा अघि कथा बगेको छ त्यो गति समातिरहन सकेको भए फिल्म धेरै उत्कृष्ट हुने थियो । निर्देशक निश्चल बस्नेत यहाँनिर चाहिँ चुकेका छन् ।
चलचित्रका धेरैजसो संवाद भने चोटिला लाग्छन् । पात्रको स्वभाव प्रयोग गर्ने साधारण संवादले दर्शकलाई बेलाबेलामा हँसाइरहनु चलचित्रको सबल पक्ष हो ।
दोहोरो अर्थ लाग्ने संवाद दर्शकका लागि स्वाभाविक लाग्छन् किनकि हाम्रै समाजवरिपरि बोलिने भाषालाई पात्रअनुसार प्रयोग गरिएको छ । दर्शक पर्दामा भुल्ने बाटो संवाद पनि हो । कलाकारको अभिनय उत्कृष्ट छ । पात्रले आफ्नो भूमिकालाई कुशल रूपमा प्रयोग गरेका छन् । सौगातले आफ्नो भूमिकालाई न्याय दिएका छन् । पूरै कथा हाकुकै वरिपरि घुम्छ । कतिपय दृश्य भने भद्दा लाग्छन् ।
चलचित्रको छायांकन पक्ष सुन्दर लाग्छ । पुरुषोत्तम प्रधानले लामा लामा शटलाई पनि कलात्मक रूपमा क्यामेराको फ्रेममा कैद गरेका छन् । उनको काम प्रशंसनीय छ । र, चलचित्रको संगीत पक्ष पनि राम्रो लाग्छ । ब्याकग्राउन्ड म्युजिक ‘लूट २’ को अर्को प्रशंसा हो ।
पात्रको मनोविज्ञान, कमाउँदै जाँदा बिस्तारै बढ्दै गएको अङ्ग्रेजी मोह, जीवनशैली आदिको समायोजन मिलेपनि चलचित्रमा केही नमिलेको हो कि भन्ने अभाव खड्किरहन्छ ।
कथानकमा बस्नेत चुकेका छन् । तर संवाद जनबोलीको चयन गरेका छन् ।
चलचित्रको अर्को कमजोर पक्ष के हो भने कतिपय दृश्य त पुरानो चलचित्र ‘लूट’ बाटै लिइएको हो कि झैं पनि लाग्छन् । देवेनको प्रेमलाई अल्झाइएको छ । कथानक जब बिस्तारै बदलाबाट बैंक लुट्ने उद्देश्यतिर मोडिन्छ, पात्रहरू एकाएक सेलाउन थाल्छन् । हाकुसँग बदला लिन रगत चुसेको बाघझैं गरेका पात्रहरू एकाएक सेलाउँछन् । कथा कमजोर बन्दै जान्छ ।
यद्यपि मनोरञ्जनका लागि चलचित्र हेर्न हलसम्म जाँदा तपाईंलाई दिक्क भने लाग्ने छैन । एक्सन र हास्य रसले चलचित्रलाई ‘स्वादिष्ट’ बनाएको छ । तर ‘लूट’ का तुलनामा यसको सिक्वेल केही कमजोर देखिन्छ ।
« Reply #8 on: October 09, 2017, 09:03:03 PM »
loot2release bhayo ra, malai tha pani thiyena
« Reply #9 on: February 06, 2018, 08:59:53 PM »
Alisha-Rai-Music-Video-Image.jpg (53.84 kB, 750x422 - viewed 193 times.)